Ngwaọrụ ndị mba ọzọ na-etinye uru dị ukwuu maka uru ụlọ ọrụ. Ndị ibe ya na-adabere na enyemaka na ego ha na-enweta. A na-ekpochi ndị ahịa ebumnuche nke ngwaọrụ ụlọ na nke mba ọzọ na mbido, ụlọ ọrụ akọwapụtara na ụlọ ọrụ nwere atụmanya azụmaahịa. Ha kwadoro ...
ARKL M Ahịa Ugbu a, na usoro nke usoro azụmahịa nke ụlọ ọrụ ngwa ọrụ China, akụkụ ya na-egosi atụmatụ "e-commerce tool", na-eji asntanetị emeju dị ka ọwa ahịa; mgbe ị na-enye ngwaahịa dị ala, ọ nwere ike iji amamihe dozie nsogbu dị omimi ...